ပရိသတ္ေတြေမၽွာ္လင့္ေစာင့္စားေနတဲ့ တန္ခြန္ေက်ာ္ရဲ့ “ခံနိုင္ရည္မရွိေတာ့” သီခ်င္း ဗီဒီယိုေလးပါ ပရိသတ္ႀကီးေရ – Myanmar Update News
ပရိသတ္ေတြေမၽွာ္လင့္ေစာင့္စားေနတဲ့ တန္ခြန္ေက်ာ္ရဲ့ “ခံနိုင္ရည္မရွိေတာ့” သီခ်င္း ဗီဒီယိုေလးပရိသတ္ႀကီးေရ
ပရိသတ္ေတြရဲ့အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္တန္ခြန္ေက်ာ္ရဲ့ ပထမဆုံး သီခ်င္းေလးျဖစ္တဲ့ “ခံနိုင္ရည္မရွိေတာ့” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလးကို ပရိသတ္ေတြနားဆင္ၿပီးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။မေန႔က ဇူလိုင္လ (၃၁)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းမွာေတာ့ တန္ခြန္ေက်ာ္ရဲ့
“ခံနိုင္ရည္မရွိေတာ့” သီခ်င္းေလး ရဲ့ Music Video ေလးထြက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။သီခ်င္းေလးထဲမွာေတာ့ တန္ခြန္ေက်ာ္နဲ႔ ပရိသတ္ေတြရဲ့အခ်စ္ေတာ္ မင္းသမီးေခ်ာေလး သံသာမိုးသိမ့္တို့က အတြဲညီညီနဲ႔ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။
သီခ်င္းေလးကေတာ့ ထြက္ရွိလာကတည္းက ပရိသတ္ေတြရဲ့ ရင္ထဲကို ေရာက္ခဲ့တဲ့ အေဆြးသီခ်င္းေအးေအးေလးပဲျဖစ္ၿပီး MV ေလး ထြက္ရွိလာခ်ိန္မွာေတာ့ တန္ခြန္ေက်ာ္နဲ႔ သံသာမိုးသိမ့္တို့ရဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္မွုေတြက ပိုလိုေတာင္ ခံစားခ်က္ေတြ
ျပင္းထန္ေစမွာေတာ့ အမွန္ပါ။ ပရိသတ္ႀကီးေတြေရာ တန္ခြန္ေက်ာ္ရဲ့ “ခံနိုင္ရည္မရွိေတာ့ ” သီခ်င္းေလးကို နားေထာင္ၿပီးၾကၿပီလား။ ေလာေလာလတ္လတ္ ထြက္ရွိထားတဲ့ Music Video ေလးကိုေရာ ၾကည့္ရွုခံစားၿပီးၾကၿပီလား။
မၾကည့္ရေသးတဲ့ ပရိသတ္ေတြ ၾကည့္ရွုလို့ရေအာင္ ျပန္လည္မၽွေဝေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။Source – TAN KHUN KYAW
ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ တန်ခွန်ကျော်ရဲ့ “ခံနိုင်ရည်မရှိတော့” သီချင်း ဗီဒီယိုလေးပရိသတ်ကြီးရေ
ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် အဆိုတော်တန်ခွန်ကျော်ရဲ့ ပထမဆုံး သီချင်းလေးဖြစ်တဲ့ “ခံနိုင်ရည်မရှိတော့” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ပရိသတ်တွေနားဆင်ပြီးကြမယ်ထင်ပါတယ်။မနေ့က ဇူလိုင်လ (၃၁)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာတော့ တန်ခွန်ကျော်ရဲ့
“ခံနိုင်ရည်မရှိတော့” သီချင်းလေး ရဲ့ Music Video လေးထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သီချင်းလေးထဲမှာတော့ တန်ခွန်ကျော်နဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေး သံသာမိုးသိမ့်တို့က အတွဲညီညီနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
သီချင်းလေးကတော့ ထွက်ရှိလာကတည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲကို ရောက်ခဲ့တဲ့ အဆွေးသီချင်းအေးအေးလေးပဲဖြစ်ပြီး MV လေး ထွက်ရှိလာချိန်မှာတော့ တန်ခွန်ကျော်နဲ့ သံသာမိုးသိမ့်တို့ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေက ပိုလိုတောင် ခံစားချက်တွေ
ပြင်းထန်စေမှာတော့ အမှန်ပါ။ ပရိသတ်ကြီးတွေရော တန်ခွန်ကျော်ရဲ့ “ခံနိုင်ရည်မရှိတော့ ” သီချင်းလေးကို နားထောင်ပြီးကြပြီလား။ လောလောလတ်လတ် ထွက်ရှိထားတဲ့ Music Video လေးကိုရော ကြည့်ရှုခံစားပြီးကြပြီလား။
မကြည့်ရသေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုလို့ရအောင် ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Source – TAN KHUN KYAW
ခံနိုင်ရည်မရှိတော့ . . . KhanNaingYayMaShiTaw. . .
#ခံနိုင်ရည်မရှိတော့…….Official…Music…VideoLyrics – KarGyiVocal – Tan Khun KyawCoach – Tracy Yin Min TinViolin – Saw NovelMusic – Hi BirdMixing – Kyaw Kyaw TunThanks God …ဒီMusic Video ဖြစ်မြောက်လာဖို့ အဘက်ဘက်မှ ၀ိုင်း၀န်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြပါသော လူကြီးမင်းများအားလုံးကို‌ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်၊၊Audio (Mp3) link : https://www.joox.com/mm/album/nVpqSdWGI3dF+hbOT35ryw==ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည်TanKhunKyawOfficialFacebookPageThankYouAll
Posted by TAN KHUN KYAW on Thursday, July 30, 2020
သံုးနွစ္ေလာက္ ႀကိတ္ေၾကြခဲ႔ ရျပီးမွ Gay ျဖစ္ေနမွန္း သိလိုက္ရတဲ႔ ေရႊအိမ္စည္
နာမည္ႀကီး ေဘာလိဝုဒ္မင္းသား Sushant Singh Rajput ဟာ သူ႕အိမ္တြင္ စူဆိုက္လုပ္ကာ ေသဆုံးသြား